Tirada Ragii ka Dambeeyay Weerarkii Pizza House iyo Hotelka Posh oo la shaaciyay – Radio Daljir
Juunyo 15, 2017 8:04 b 1
Wasaarada Amniga Gudaha Xukuumada Soomaaliya ayaa ka hadashay weerarkii is qarxinta iyo midkii tooska ahaa ee xalay dagaalyahano katirsan Al Shabaab ku qaadeen Maqaayada Pizza House iyo Hotelka Posh Treats ee kuyaala magaalada Muqdisho .
Afhayeenka Wasaarada Amniga Gudaha Axmed Sayid Carab oo Warbaahinta kula hadlay Dhismaha Maqaayada Pizza House ayaa sheegay in weerarkii ka dhacay halkaasi ay ka dambeeyeen lix nin oo katirsan Al Shabaab oo mid kamid ah is qarxiyay.
Waxa uu xusay Afhayeenka in shan dagaalame oo gudaha u galay dhismaha Hotelka Pizza la toogtay, waxa uuna tilmaamay in howlgalka ay soo afjareen ciidamada amaanka ayna dileen dhamaan ragii weerarkaasi ka dambeeyay.
Afhayeenka ayaa beeniyay in Al Shabaab gudaha u galeen kana dhax dagaalameen dhismaha Hotelka Posh, waxa uuna xusay in dagaalyahanada Al Shabaab ay galeen dadna ku dhax toogteen dhismaha Maqaayada Pizza Hose.
Axmed Sayid Carab ayaa sheegay in weerarka ismiidaaminta iyo midka tooska ah ee xalay lagu qaaday Pizza House iyo Posh lagu dilay dad gaaraya 18-qof, waxa uuna tilmamaay in dadkaasi la dilay in uu ku jiro hal nin oo ajnabi ah oo u dhashay dalka Siiriya.
Al Shabaab ayaa sheegatay masuuliyada weerarkan xalay ka dhacay magaalada Muqdisho, waxa ayna Shabaab sheegeen in ay weerareen Hotel lagu tunto oo kuyaaal Muqdisho ayna halkaasi ku dileen dad badan oo isugu jira Soomaali iyo ajaaniib.
Fatima Fatima Gajo 3 years ago
Allaaah Yaa Arxama Raximiin Samir Iyo Iimaan Allaah Ha Naga Siiyo